Nhau - GlassTec - Matambudziko Matsva
GlassTec - Matambudziko Matsva
Glasstec VIRTUAL kubva musi wa20 kusvika 22 Gumiguru yakabudirira kuvhara musiyano uripo pakati pazvino neiyo glasstec iri kuuya muna Chikumi 2021. Nepfungwa yayo inosanganisira dhijitari yekuchinjisa ruzivo, nhaurwa yekuratidzira mikana yevaratidziri pamwe nekuwedzera mikana yekutengesa, yakagonesa girazi renyika dzese .
“Nekwayedza yeglasstec chaiyo Messe Düsseldorf inoratidza kuti inogona kubudirira kuunza maindasitiri pasi rese, kwete pazviitiko zvepanyama chete asi nemafomati edhijitari. Izvi zvinoreva kuti iri kuramba ichizvimisazve seNhamba 1 yekufambiswa kwemabhizimusi ekutaurirana epasi rose, ”anodaro Erhard Wienkamp, ​​COO Messe Düsseldorf.
“Denda repasi rose idambudziko guru kune vemaindasitiri egirazi uyezve kune vanogadzira michina nevarimi munzvimbo ino. Naizvozvo, zvaive zvakakosha kuti Messe Düsseldorf atipe fomati nyowani "glasstec VIRTUAL" kuti tikwanise kuratidza zvigadzirwa zvedu zvitsva munguva dzino futi. Yakasiyana neyakajairwa glasstec, asi yakakosha uye yakajeka chiratidzo yeiyo indasitiri. Isu takafara kutora mukana weiyo yakazara musangano musangano uye mukana wekuratidza zviitiko zvitsva uye zvakakosha kuburikidza newebhu zvikamu uye neyedu nzira, uye isu takagamuchirawo mhinduro yakanaka. Zvakadaro, tiri kutarisira kusangana zvakare pachedu ku glasstec muDüsseldorf muna Chikumi 2021 ”, anodaro Egbert Wenninger, Mutevedzeri Wemutungamiriri weBusiness Unit Glass, Grenzebach Maschinenbau GmbH uye Sachigaro we glasstec exhibitor Advisory Board.
"Munguva yedenda, mhinduro iyi yakaita kuti tikwanise kupa indasitiri imwe chikuva chekusimbisa nekukudza kufambidzana kwenyika dzepasi rose. Iye zvino tarisiro ndeyekugadzirira glasstec, ichaitirwa muno muDüsseldorf kubva musi wa15 kusvika 18 Chikumi 2021, ”anodaro Birgit Horn, Project Director glasstec.
Kupfuura zana nemakumi maviri emapeji ekuratidzwa kwemapeji anosimbisa kufarira kunodiwa kwakatorwa nenharaunda yegirazi mune zvirimo glasstec VIRTUAL. Ku Exhibitor Showroom, varatidziri mazana masere kubva kunyika makumi mana nemana vakapa zvigadzirwa zvavo, mhinduro nemashandisirwo. Vanopfuura vanhu zviuru zvishanu vakapinda mumafomati ekudyidzana. Ese maratidziro ewebhu uye makwara emusangano zvichakurumidza kuwanikwa pazvinodiwa. Idzo dzimba dzekuratidzira dzevanotora chikamu dzichange dzichiwanikwa kune vashanyi kusvika glasstec munaJune 2021.
Post nguva: Nov-09-2020